GSTV: Macaamiisha Bartilmaameedka ah ee Bam-gacmeedka oo leh Khibrad Fiidiyoow ah oo Goob Ku-saleysan | Martech Zone
Talaado, Agoosto 18, 2020 Talaado, Agoosto 18, 2020 Douglas Karr
Maalin kasta, malaayiin Mareykan ah ayaa raacda gawaaridooda oo taga. Shidaal siinta wadayaasha gaadiidka, ganacsiga, iyo iskuxirka; waana marka GSTV waxay leedahay feejignaantooda aan lakala qaybin.
Maalin kasta, tobanaan kun oo goobood, shabakadooda fiidiyowga ee qaran waxay leeyihiin daqiiqad gaar ah oo muhiim ah, marka macaamiisha ay ku hawlan yihiin, soo dhaweynayaan, kharash badan ku bixinayaan maanta oo ay saameyn ku leeyihiin berri iyo wixii ka dambeeya. Xaqiiqdii, GSTV waxay gaaraysaa 1 3dii XNUMX qof oo qaangaar ah oo Mareykan ah bil kasta, iyagoo ku mashquuliya daawadayaasha aragti buuxa, dhawaq, iyo fiidiyoow dhaqdhaqaaq leh iyadoo loo marayo marin muhiim ah safarkooda macaamiisha.
Daraasado kiisaska GSTV waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada bulshada, kor u qaadista iibka tafaariiqda, kordhinta waxtarka xayeysiinta, booqashada dukaanka iyo iibinta, kor u qaadista kharashka macaamiisha, dhismaha wacyigelinta daawadayaasha iyo la socoshada, iyo kor u qaadista booqashada websaydhka.
GSTV Foomka Tusaalaha Muuqaalka Gaaban
Fursadaha ayaa ah inaad aragtay oo aad ka jawaabtay fiidiyowyadan foomka gaaban ee wada wicitaanka-waxqabadka. Waa tan tusaale wanaagsan oo loogu talagalay shirkadaha tafaariiqda si aad u hesho qof gaaska ka soo shubaya inuu u soo galo dukaanka oo uu wax iibsado:
GSTV waxay hawlgelisaa dadka waaweyn oo leh boqolaal milyan oo shaqsi ah 1-ilaa-1 isdhexgal si loo maaweeliyo, loo wargeliyo, loola xiriiro, loona gaarsiiyo daqiiqad dhaqaajisa maanta iyo arrimaha berri. Faa'iidooyinka dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah waxaa ka mid ah:
Bixinta - Dhallinyar, firfircoon, dhagaystayaal hodan ah, oo ku bixiya + 1.7x dheeraad ah ka dib macaamil shidaal
Dadka dhabta ah - Shabakad hubin Nielsen ah, oo aan lahayn bots, khiyaano iyo DVRing
Brand Amaan - Waxyaabaha aasaasiga ah ee loogu talagalay dhagaystayaasha guud
Engagement - Socdaalka, cuntada, dhageysiga, dukaameysiga, qarash gareynta, iyo inbadan oo inta lagu gudajiro hakad ku jira safarkooda
Awoodda loo maro GSTV's 95 milyan ee soo booqdayaasha gaarka ah waxaa ka mid ah awoodda lagu bartilmaameedsanayo dhagaystayaasha xisbiyada ugu horreeya iyadoo lagu saleynayo tirakoobka dadka, juqraafi ahaan, iyo akhlaaqdooda.
GSTV waxay ka caawisaa suuqleyda inay gaaraan natiijooyin ganacsi oo la qiyaasi karo isla markaana ay kordhiyaan qarash gareynta xayeysiinta. GSTV waxay soo kordhisay koror laba-godle ah oo ku yimid booqashada tafaariiqda, malaayiin doolar oo kor u qaadista iibka ah, iyo koror aad u weyn oo ku yimid halbeegyada wax lagu iibiyo ee qaar ka mid ah xayeysiiyaasha adduunka.
GSTV waxay ku kordhisay Mawduuca Loop Media
Warbaahinta Loop, Shirkad warbaahineed oo warbaahin ah oo si gaar ah diiradda u saartay fiidiyow qaab-gaaban oo gaaban ah, ayaa ku dhawaaqday iskaashi ay ka kooban tahay GSTV si loo soo saaro loona wadaago fiidiyowyo muusig qaab-gaaban ah, fiidiyowyo muusig oo sare ah, isjiidka filimka ee sii-deynta cusub, iyo isku-darka filimka ugu sarreeya.
Foomkan gaagaaban ee socodsiinta ah wuxuu siinayaa fursado sumadaha iyo suuqleyda inay si wax ku ool ah ugu bartaan macaamiisha ka baxsan guriga.
La xiriir GSTV
Tags: xisbiga koowaadxogta xisbiga ugu horeysabamka shidaalkasaldhiga gaaskagstvvideo qaybintashabakadda fiidiyowga